झलनाथ भन्छन्, 'केपीले किन अमानवीय व्यवहार देखाउँछन्, मलाई आश्चर्य लागेको छ' - समाचार - कान्तिपुर समाचार
झलनाथ भन्छन्, 'केपीले किन अमानवीय व्यवहार देखाउँछन्, मलाई आश्चर्य लागेको छ'
‘देशका निम्ति लड्ने कम्युनिष्ट साथीहरुमाथि भएको कारबाही केपीको हिटलरी हर्कत हो, यिनको कारबाहीले रौं पनि हल्लिँदैन ।'
काठमाडौँ — नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफूहरुमाथि कारबाही गरेर केपी ओलीले हिटलरी हर्कत देखाएको बताएका छन् । सोमबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले नेता खनालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसलगत्तै कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा नेता खनालले देशका निम्ति लड्ने कम्युनिष्ट साथीहरुमाथिको कारबाहीलाई ओलीको हिटलरी र अमानवीय हर्कत भएको बताए ।
‘अहिले केपी ओलीको कुनै खुर्सानी बारी मैले फाँडेको थिइनँ । उनले किन कारबाही गर्नुपर्‍यो ? उनी आफैं अपराध गर्ने, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ध्यवस्त पार्ने, एकतालाई ध्वस्त पार्ने, राष्ट्रलाई ध्वस्त पार्ने, विदेशीहरुको एजेन्ट भएर हिँड्ने तर देशभक्त, कम्युनिष्ट योद्धाहरु, देशका निम्ति लड्ने साथीहरुलाई कारबाही गर्ने हिटलरी हर्कत हो । अमानवीय र क्रुर हर्कत हो,’ खनालले भने । तर, त्यस्ता कारबाहीको कुनै अर्थ नभएको खनालको भनाई छ ।
खनालको भनाई जस्ताको तस्तैः
म करीब एक महिनादेखि बिरामी छु, सुतिराखेको छु । मलाई देशको पछिल्लो राजनीति बारेमा पनि त्यति थाहा पनि छैन । तर, यो देशको प्रधानमन्त्री जुन प्रकारको क्रुरता, अमानवीयता, हिटलरीपन देखाईरहेका छन्, यो बडो आश्चर्यजनक कुरा भएको छ ।
अहिले केपी ओलीको कुनै खुर्सानी बारी मैले फाँडेको थिइनँ । उनले किन कारबाही गर्नुपर्‍यो ? उनी आफैं अपराध गर्ने, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ध्यवस्त पार्ने, एकतालाई ध्वस्त पार्ने, राष्ट्रलाई ध्वस्त पार्ने, विदेशीहरुको एजेन्ट भएर हिँड्ने । देशभक्त साथीहरु, कम्युनिष्ट योद्धाहरु, देशका निम्ति लड्ने साथीहरुलाई कारबाही गर्ने हिटलरी हर्कत हो । अमानवीय र क्रुर हर्कत हो ।
म २०२० सालदेखि देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निरन्तर लागेर आएको छु । मैले देश, जनता, राष्ट्रको निम्ति जे–जस्ता काम गरेको छु, ती सबै छर्लङ्ग छन् । केपी ओली जस्ता अपराधीले कुनै कारबाही गर्दैमा, अहिले सिकिस्त बिमारी भएर सुतिरहेको अवस्थामा पनि मेरो एउटा रौं पनि हल्लिँदैन । तिनले किन त्यस्ता कारबाही गर्छन्, किन अमानवीय व्यवहार देखाउँछन्, मलाई आश्चर्य लागेको छ । बाँकी कुरा देशले समाल्दै जान्छ । सारा कमरेडहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले अगाडि बढाउँदै लानुहुन्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन आफ्नै ढंगले दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ ।
मलाई विभाजन शब्द मन पर्दैन । तर, केपी ओलीजस्ता विघटनकारी र दक्षिणपन्थीले पार्टी कब्जा गरेको हुँदा देशको कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत भएर पनि फेरि विभाजनतर्फ जान विवश भएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७८ २१:२७
निषेधाज्ञा कडा पार्न गृहको परिपत्र
जेष्ठ १०, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले कोभिड संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी केही दिनअघि जारी भएको अध्यादेश अनुसार निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासनमा परिपत्र गरेर कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र यससम्बन्धि जारी गरिएका प्रतिकार्य योजना अध्यादेशका प्रावधान अनुसार कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) तथा प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पनि त्यसको बोधार्थ दिइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न जारी गरिएको अध्यादेश अनुसार निषेधाज्ञा लगाउन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई सोही अनुसार कारबाही गर्न स्पष्ट रुपमा निर्देशन दिइएको बताए ।
पछिल्लो अध्यादेशले महामारीविरुद्ध प्रतिकार्य योजना लागू गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रतिकार्य अधिकारी तोकेको छ । प्रजिअकै अध्यक्षतामा जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमा उल्लेखित कैद र जरिवानाका प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिने भन्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सोमबार नै सार्बजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।
ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले अध्यादेश अनुसार निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गरिने बताए । उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले संयुक्त बैठक बसेर आगामी निषेधाज्ञाको मोडालाटिमा परिवर्तन गरिने बताए । उपत्यकामा वैशाख १६ बाट जारी निषेधाज्ञा बिहीबार सकिदै छ । निषेधाज्ञा थप्न मंगलबार तीनवटै प्रशासनको बैठक बस्दै छ । ‘नयाँ व्यवस्था अनुसार कैद र सजायको व्यवस्था निकै कडा छ, आम सर्वसाधारण यसलाई मनन गरेर अनावश्यक रुपमा घरबाहिर ननिस्कनुस, महामारीविरुद्धका आदेश उल्लंघन नगर्नुस, अटेर गरिए अव कैद र जरिवानाको तहसम्मै जान बाध्य हुन्छौं,’ सहायक प्रजिअ बस्‍नेतले कान्तिपुरसँग भने ।
बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना महामारीविरुद्ध ल्याइएको अध्यादेश जारी गरिसकेकी छन् । अध्यादेश अनुसार निषेधाज्ञामा अनुमति बेगर सवारी चलाए २ पाङग्रेलाई २ हजार र ४ पाङग्रेलाई ५ हजार जरिवाना, मास्क नलगाए पटकै पिच्छे १ सय र निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर हिँडडुल गरे प्रत्येक पटक २ सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।
आदेश विपरित काम गरे संस्था वा व्यवसायलाई ६ महिना बन्द गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रजिअलाई छ । काममा अवरोध पुर्‍याए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका प्रमुखलाई १ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आदेश अटेर गरे ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्न प्रावधान पछिल्लो अध्यादेशमा समेटिएको छ । यसैगरी महामारी रोकथामका लागि प्रशासनबाट जारी आदेश उल्लंघन गरेमा व्यक्तिलाई १ लाख र संस्था भए ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि महामरीविरुद्धका प्रतिकार्य योजना उल्लंघन गरेमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र संक्रामक रोक ऐन २०२० का प्रावधान अनुसार कारबाही हुने गरेको थियो । कैद र जरिवानाको मात्रा यसमा थोरै थियो । अध्यादेशले सजायको मात्रालाई पनि बढाएको छ । संक्रामक रोग ऐन अनुसार अदेश उल्लंघन गरे १ सय रुपैयाँ जरिवाना वा एक महिना कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ । काममा अवरोध पुर्‍याए ६ महिना सम्म कैद वा ६ सय रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७८ २१:१६